ကျွန်တော်မတတ်သော ccna နဲ့ ကျွန်တော်တက်သော ccna- စာမျက်နှာ2— MYSTERY ZILLION
ပို့စ်မရေးတာကြာတော့ ကျွန်တော် စာတောင် မနည်းပြန်ရှာယူကတယ်... အလုပ်မအားဘူး.... ပိုက်ပိုက်ရှာကတယ်... မလွယ်ဘူးနော် ခုတလော wireless အကြောင်းလေးပြောချင်လို့
ကျွန်တော်တို့ wireless ကိုသုံးတဲ့အခါမှာ a,b, g , n ရှိမယ် အရှည်တော့မပြောတော့ဘူး အကုန်သိပြီးသားမို့လို့နော်... g မှာဆိုုရင် super g ရှိတယ် 108 ထိရမယ်... သိပ်အသုံးမ၀င်ဘူးဖြစ်နေတယ်. N draf version ဆိုတာရှိသေးတယ်နော် n မှာလည်း citicom မှာရှိတဲ့ N တွေအကုန်လုံးက Draf တွေပဲ powerful အပြည့်မဟုတ်သေးဘူ..... အိုကေ
ကျွန်တော်တို့ဆိုင်မှာသွားမေးတယ် N ဆိုရင် ဘယ်လောက်ရမလဲ.... G ဘယ်လောက်ရမလဲပေါ့... ဆိုင်ကပြောသောအကွာအေ၀းတွေကိုမယုံပါနဲ့.. N က မီတာ ၁၀၀ သွားမယ် ဒါဟာအလွန်အလွန်အေ၀းဆုံးပါ.... ဒီလိုသွားဖို့ကို လမ်းမပေါ်မှာ သွားထားကမလိုဖြစ်နေတယ်... ကျွန်တော် လမ်းမပေါ်မှာထားပြီးချိတ်တာ မီတာ 50 လောက်ကိုတော့ ကောင်းကောင်းသွားတယ်... ဒါလဲ N ကဒ်နဲ့ပဲဖမ်းတာနော်.... ကိုရဲ့ အိမ်နားပတ်၀န်းကျင်ကို ချိတ်မယ်ဆိုရင် G adapter နဲ့ချိတ်လို့ရတယ်... ဒါပေမဲ့ ရန်ကုန်စျေးကွက်မှာရှိတဲ့ Linksys boster ကတော့မဆိုးလှဘူး... တော်တော်ကောင်းတယ်လို့ပြောကမှာပဲ..... N က 4x နဲ့သွားတယ်... G ထက်ကို 12 ဆလောက်မြန်တယ်ဆိုပဲ... ဒါလဲ အမှန်ပါပဲ....... ဒီတော့ N သုံးရင် ဘာတွေကောင်းမလဲ speed ကောင်းမယ်.... MIMO ဆို့တဲ့ multiple အလုပ်လုပ်တဲ့ ကွန်နက်ရှင်ကောင်းမယ်.... ဒီတော့ N ကိုပဲသုံးမယ်...တစ်လမ်းလုံးဆိုရင်တော့ extender ပါသုံးကတော့မယ် ခက်တာက repeater ကလည်း N မထွက်သေးဘူး.............. နောက် နက်ေ၀ါပစည်းကလည်း ရှားသေးတယ်........
ပိုကောင်းချင်ရင် Giga နက်ေ၀ါ့ကိုသုံးလိုက် အာရားလန်ထွက်နေတာပဲ တစ်ကယ်ကောင်းတယ်နော်.... DVD တစ်ချပ်ကို 1 မိနစ်သာသာပဲဗျာ............. လှမ်းပြီး တစ်ခြားစက်ကနေကူးတာ..............
နည်းနည်းစမ်းစမ်းလေးသုံးချင်လား ဒါဆို powercabel နဲ့သွားတဲ့ Powerline ကိုသုံးလို့ မီးသွယ်ထားတဲ့ နေရာ တော်တော်များများရတယ်ဆိုပဲ...........
အယ် ပြောဖို့မေ့နေတယ်ဗျာ.......... MICT ကဖွင့်တဲ့ Layer2 သင်မဲ့သင်တန်းက ၂ ရက်ကို ၁သိန်းခွဲတဲ့ နည်းနည်း အကြံပေးကြပါဦး...................... certf တော့ရမယ်........
ဒာကို ရေ ဒာကို တင်ပေးခဲ့တဲ့ sen space က ဖိုင်တွေက link တွေ တစ်ခုမှ မရတော့ ဘူး ...ဒာဒီ file လေးတွေ ဒာကုန်လိုချင်လို့ ဒာကို ဒာစဉ်ပြောတာလေးနဲ့ ပြန်တင်ပေးပါလား ဒာကို ...post ဒာလုံး ဒာတွက် ဒီ ကပဲပေါင်းပြီး ကျေးဇူးတင်လိုက်တော့မယ်နော်...hardware ပိုင်း ဆွေးနွေး ချက်မှာ ကတည်း က ကျိတ်ပြီး လေးစားနေတာ ....ဒာကို ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..ထပ်ပြီး သင်ပြပေးပါ ဒာုံးနော်:):):)
http://www.sendspace.com/file/5fnp50 [URL="http://[url]http://www.sendspace.com/file/5fnp50[/url]"]ဒီလင့်လေးပါ [/URL].
ူlink မှာ ဖိုင် မရှိဘူးပြနေလို ့ပါ တစ်ချက်လောက်ပြန်တင်ပေးစေလိုပါတယ် ...ကျေးဇူးပါခင်မျာ